Maxaa gabadhan yar daba dhigay nadiifinta qabuuraha? |
Maxaa gabadhan yar daba dhigay nadiifinta qabuuraha?
Gabar yar oo lagu magacaabo TJ Kleeman oo u dhalatay dalka Australia ayaa dad badan ka yaabisay kadib markii ay sameysay arrin ay adag tahay in dad badan ay ku dhiiradaan.
Gabadhan yar oo 12 jir ah ayaa toddobaadkii laba mar waxaa ay nadiifisaa xabaala aan ka fogeyn halka uu gurgooda ku yaalla ee magaalada Tweed heads ee dalka Australia.
“Waxa aan billaabay in aan xabaalaha gurigeena agtiisa nadiifiyo kadib markii aan imid magaalada Tweed heads, waxaan aad uga cabsanayay in xabaalo ay ku ag-yaalaan dhabarka dambe ee gurigeena, maxaa yeelay xilligaas waxaan ahaa 4 sano jir,” ayay tiri TJ Kleeman.
Hooyadeed ayay sheegtay inay ku soo wareejisay xabaalaha, waxaana ay intaa raacisay in hooyadeed ay soo jeedisay inay nadiifiyaan xabaalaha, si meesha ay uga baxdo cabsida badan ay qabuuraha ka qabtay.
“Waxaan billaabay in aan nadiifiyo xabaalaha, ilaa iyo iminkana waan nadiifiyaa”, ayay sii raacisay.
Gabadhan yar oo hawshan waday muddo 8 sano ah ayaa markii dambe ku guuleysatay abaal-marin kadib markii lagu ammaanay hawsha ay u qabatay bulshada.
Mar wax laga weydiiyay in ay hawshan sii wadi doonta ayaa TJ waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay hawsha ay heyso.
Gabdhan yar ayaa muuqaalo laga soo duubay waxay muujinayaan iyadoo biyo iyo saabuun ku nadiifineysa xabaalaha.
Waxay markii hore sheegtay in sababta ay u nadiifineysay xabaalaha ay ahayd cabsi ay ka qabtay in laga yaabo inay qabuuraha ruuxaan ka soo baxaan, waxaase markii dambe ay sheegtay inay la qabsatay oo aysan mardambe ka cabsan doonin xabaalaha ku yaalla gurigooda dhabarkiisa dambe.